Author: Mijora Minos
December 21, kii waa maalintii uu geeriyooday geesigii Soomaaliya Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, hadaba 95 sano kadib dadka ma xasuustaan Sayid Maxamed Cabduule Xasan. Rabbaa deeq leh Nin aqdaamo ferenji ah 6. Waxaana fiican inaan si fudud ku heli karno iyagoo cod ah.
Taariikhdii iyo Xusuustii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan – Goobjoog News
Qaali waxaad tiraahdaan Hal-abuurayaasha dejiya suugaantaasna waxaa la og yahay iney door weyn ka cayaaraan isuduwidda, kicinta iyo gabayadi ummaddaas. Jidheeyadey ila dhaceen jilic afkoodii dheh Siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego Billaawuhu siduu kuu jarjaray jiirarka u muuji.
Mar baan soo gelinnay, laakin khaladaad badan baa ku jiray.
Awel maanso waataan balfay Dhabdarrada ma qaayibo Dhawaan naga filo, inshaa-Allaah…. Sayid Maxamed wuxuu ka mid yahay abwaannada waaweyn ee taariikhda Soomaalida meel ka galay.
Aad baad u mahadsan tihiin sida quruxda badan eed noogu soo dhigteen shaashada gabayada Sayidka. Sida la og yahay ummad kasta oo af, dhaqan iyo hidde wadaagta waxay leedahay murti iyo suugaan u gaar ah oo ay ku hirtaan.
Kaarshow camaadaa tahay Ararsame dalkiisii ka carar Caliyow calaacal iyo way Cara e yaa sheega! Mawdku ka adeegi Saw ma aha 7. Sidaa darteed, Daraawiishtu waxay ahaayeen urur gobonimo doon ah ee adduunyada ugu horeeyey ee dayuuradaad lagula dagaalamo. June 5, Ma duqaynay reer Bari July 3, sayidk waxaa dhamaaday dagaalkii saddexaad oo intuu socday Sayidka iyo Ingiriisku Bari iyo Waqooyiba ku dagaalameen.
Xuseenow ninkii xididkiis hagraday Odayaashii tan iyo muddo dheer u guntaday inay uruuriyaan ka dibna qoraan buuggan, waxaa sharaf iyo abaalmarinba ugu filan inay wariyeen wixii mahadho Sayidka laga hayey, anaguna waxay naga mutaysteen mahad iyo ammaan.
Walaal aad ayaad ugu mahadsan tihiin dadaalkiina waanad dadaasheen runtii halkaana ka sii wada. Daraawiish labaatan sano ayey duurka ku jirtay, mar la jabiyo iyo marar ay guulaystaan, Xabashi, Ingiriis iyo Talyaani intaba foodda ayey is-dareen, heshiisyo badan ayey galeen, dhamaan guuldaro ayey ku dhamaadeen. Waxaad tiraa weeye Waxaan halkan uga baahanahay in aan helo gabayadan oo lagu luuqaynayo.
Ragga Ayl u kacahayow 5. Daraawiish jikaar nagama deyn tan iyo jeerkii dheh Ingiriis jabyoo waxaa ku dhacay jac iyo baaruud dheh Waxay noo janjuunteenba waa jibashadiinnii dheh. Ta 2aad waxaa la dhihi karaa waa ninka Soomaalida ugu caqliga badnaa horaan, hadda iyo mustaqbalkaba taa cidi ka muransan ma jidho.
Ina Caliga Dhaaranahayaa Xirsiyow cod gabay Halkaan ka dhageyso warka duhur e radio wanlaweyn August 5, Like. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa walaalaha soo celiyay gabxyadii Sayidka, waxaana dheefle qof walba oo raaca xikmadihii raggii usoo halgamay Soomaali dalkeeda iyo dadkeeda.
Ugu dambayntii waxaa Sayidka lagu soo kacshay dayuuraadka dagaalka waxaana weeraradaa hogaaminayey Dhame Duuliye Gordon wuxuuna cadowgu isticmaalayey diyaaradaha noocoodu ahaa DH9, waxayna duqeeyeen Taleex, Jiidali iyo xarumihii Sayidka oo dhan. Kufriga ina gabraaraya Jiidaha xanuunka leh markii la igu jeeraarshey Jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waa dheh Markay rubaddu jaw tiri or bay iga ag jiibsheen dheh.
Sagaal nin oo walaala ah Marka waxbarasho guud mooyee, waxay gabayadu albaab weyn u furayaan qoraalka suugaanta af-Soomaaligu hodonka ku yahay. Guud ahaan waxay gabayadaasi muujinayaan dhaqankii Soomaalida iyo heerkii suugaantu waqtigaas joogtay.
Talaado, 05 September Goortaan jarreerana gefoo nolol ka jaanqaaday Sida janannadii hore sagidka igu jaguugnaa dheh Taladii jinnigu ii horkacay jisadeed helay dheh. Waa talo aad iyo aad u wanaagsan. Nimanyahow dembow lama hadlo Haasaawe layskuma xanto Diintaan wadeeca uga dhigi.